Madaxweynihii Sudan oo la xiray iyo Milatariga dalkaas oo dowlad KMG ah ku dhawaaqay – Radio Daljir
Wasaaradda Difaaca Suudaan ayaa ku dhawaaqday in dalka ay ka jiri doonto dowlada kumeel gaar ah muddo labo sanno ah.
Militariga Suudaan ayaa hadda shaaca ka qaaday in xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi ka talinayay muddo 30 sanno ah, Cumar Al Bashiir.
“Guddiga sare waxay go’aansadeen inay ku dhawaaqaan in dalka uu ka jiri doonto dowlad kumeel gaar ah muddo 2 sanno ah, militariga ayaa si rasmi ah ula wareegaya awoodda iyagoo matalaya shacabka reer Suudaan” ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Suudaan.
Dhinaca kale Wasiirka Difaaca dalka Sudan, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf ayaa taleefishinka qaranka dalkaas ka sheegay in ciidamada ay xukunka ka qaadeen islamarkaana xireen madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir.
“Waxaa aniga oo ah wasiirka difaaca ku dhowaaqayaa in xukunka laga tuuray taliskii islamarkaana madaxii taliska meel ammaan ah lagu xiray” ayuu yiri Ibn Auf.